Iindaba ezivela kwi-MobileMapper Field kunye ne-MobileMapper Office - i-Geofumed
NgoSeptemba, 2011 GPS / Izixhobo, ezintsha
NgoJuni ka-2011 iinguqulelo ezintsha zesofthiwe esetyenziswe kwizixhobo zokusebenza Ashtech, ngoko kuthengwa kwezixhobo ezintsha ezi nguqulelo ziza kungena ezifakiwe. Ndiyithatha le nqaku ukubonisa apho ingalayishwa khona, kunye neendlela ezinokubaluleka kwezi zibuyekezo:
Kwimeko ye-MobileMapper Field, ikhutshwe i-2.03 version. Le yiyasetyenziswa kwiGPS MobileMapper 6, MobileMapper 10 kunye MobileMapper 100, zonke kwiWindows Mobile.
Phakathi kwezinto ezivelele ezikhankanywe kukuba:
Inkxaso MobileMapper 10, yezona zibalaseleyo zicinga ukuba oku kuza kunika ithuba elikhulu kulo mdlalo wokudlala.
Ikhetho ukujonga ngokubonakalayo kwesikrini kunye nokunyamezela (i-HRMS ne-VRMS) esele ifunekayo kwezi zixhobo.
Inketho yokuphinda iimpawu ezibonakalayo, xa kunokwenzeka kwiimeko okanye izakhiwo ezinempawu ezifanayo, ezifana nokulungiswa apho ukusetyenziswa, iklasi, umgangatho, unokufana.
Iimpawu ezigunyazisiweyo. Xa udala uluhlu, unokuseka ukuba yiziphi iimpawu ezifunekayo, ungavumeli ukuhamba kwinqanaba elilandelayo kwithuba elide le data ingagcwaliswa.
Iibhentshi zeJob. Ezi ziitemplates, ezinokugcina indawo eziqhelekileyo, ezingafaneleki ukuba zinikezelwe rhoqo ixesha lomsebenzi oza kuqalwa; umdla, ndiyakwazi.
Igama likaJob ngoku liyabonakala kwiskrini ephezulu, eyenza kube lula ukukhupha ukudideka okanye ukushiya ukubona umsebenzi osebenzayo.
Inkxaso yokubonakalisa iMephu yeStreet Street njenge-layout yemephu, kunye noxhumano lwe-Intanethi.
4D ifayile yefayile yefom
Isibonakaliso kwisiboniso xa inkqubo ye-SBAS isebenze
Inkxaso Ifomathi ye-ESRI AXF, nangona le nguqulo ayixhasi (ukuhlaziywa) yosuku / ixesha lexesha.
Ngoku, ukufikelela kunye neprotocol ye-NMEA ayigcinwanga kwi-COM2 port xa iphuma. Kwenzeka kum, kuba kufuneka ndiyiqwalasele ngale ndlela gvSIG Mobile, okubangela ukuba uphawu lweGNSS luqwalaselwe yi-MobileMapper Field okanye i-ArcPad ukuba ilahleke.
ITRF isebenze inketho ye-transoffer kwimodi ye-SBAS
Isikhokelo sitshintsha isalathisi kwi-mode ye-MobileMapper Field
Phakathi kwezimbungulu, ingxaki yalungiswa kwintloko yeefayile zeDBF kunye nenkundla ye-multi-byte
Xa kwenzeka MobileMapper Office, uqalise inguqulo ye-2.1, le software isofthiwe esetyenziselwa ukudala imephu yemvelaphi, ukulandwa kwedatha nokuchithwa kwe-data kwedatha. Kwiinkqubo ze-Windows XP ActiveSync iyadingeka, kwi-Windows 7 ayisadingeki.
Ezi zitshintsho zilandelayo zikhankanyiweyo kule ngcaciso:
Unako ukulayisha iifayile eziliqela ngexesha elinye, kungekho enye
Umyalelo omtsha wokuhlaziya iifayile zobume
Inkxaso yeFayile yeFayile ye4D kunye nohlobo lwe-M
Ukungenisa idatha ye-ATOM RNX yedatha
Ngoku unokwenza i-post-process processing ne-MobileMapper 10
Umsebenzi omtsha ukuhlaziya iifolda zokusetyenziswa ngokuqhelekileyo ekudlulisweni kwedatha phakathi kwecebo kunye nePC
Inkxaso yokulawula iinguqulelo zenguqulo, ngaphandle kokubuyiselwa ukusuka ekuqaleni
Iinkqubo zokulungelelaniswa kweShayina kunye neembalo ezimbini kwiimpawu zaseJapane ziye zahlaziywa
MobileMapper Field 2.03, kwi-MobileMapper 100, ngesiSpanish
I-MobileMapper Field 2.0 (2.03), kwi-MobileMapper 10, ngesiSpanish
I-MobileMapper Office ye-MobileMapper 6, i-MobileMapper 100, i-MobileMapper i-10
Ukuhlaziywa kwe-MobileMapper Office kubonakala kunzima kakhulu, ngoko bekungeke kulimaze ukukhipha.
Kwimeko ye-MobileMapper Field, i-cab entsha yenza yonke imisebenzi, kubandakanywa ukubuyiswa kwekhowudi yokuqalisa ukusebenza okanye i-GLONASS. Nangona kufuneka uqaphele kwi-MobileMapper 6, apho kubonakala ukuba ayihlolwe.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-GGL yokusetyenziswa kolwimi ekhoyo kwi-gvSIG
Post Next I-PlexEarth, Yintoni eyenza i-2.5 inguqu kwimifanekiso yeGoogle EarthOkulandelayo "
Iimpendulo ze-6 "Iindaba ezivela kwi-MobileMapper Field kunye ne-MobileMapper Office"
UMarcelo Oliveira uthi:
Sine-mapper yesoftware eyi-100. Ungawakhuphelisa njani amadayisi aluhlaza okanye kwiPC eneWindows Vista?
I-estação ayixhumi kunye nekhompyuter
Andinayo ikhowudi yokusebenza ye-MOBILEMAPPE6.0 oku kwafunyanwa yiyunivesithi kodwa ngoku abayiyifumani cd
jose barrios uthi:
Ndineemephu ze-6 imephu kodwa iikhowudi zokusebenza zeemoto zeemephu ezihambahambayo zalahleka ngendlela endingazifumana ngayo iikhowudi okanye ndithenge umbulelo omtsha okanye enye inkqubo eya kundinceda ukuba ndisebenzise izixhobo, mbulela
Andicingi ukuba ingafakwa kwiWindows CE.
Oscar Vargas Rosales uthi:
i-magellan cx gps ngeefestile zeEC; umbuzo ungayifaka i-MobileMapper Field
hector suarez uthi:
Ndiyabulela imiyalelo yeqela lakho, ndiyakucela ukuba ndiyakuthanda phi apho ndifumana iklasi yokuqhuba eli qela